ISave SA neDA bagxeke ukudayiselwa kukaManyi isiteshi nephephandaba labakwaGupta | isiZulu
ISave SA neDA bagxeke ukudayiselwa kukaManyi isiteshi nephephandaba labakwaGupta
I-ANC yathola iminikelo evela kwabakwaGupta - Mkhize
Matthew le Cordeur noCarin Smith
Cape Town – Inhlangano iSave South Africa kanye neDemocratic Alliance (DA) sebezwakalise ukukhathazeka ngesinqumo somndeni wakwaGupta sokudayisa isiteshi sikamabonakude i-ANN7 kanye nephephandaba i-The New Age (TNA), bedayisela uMzwanele Manyi.
Inkampani yabakwaGupta, i-Oakbay Investments, imemezele ngoMsombuluko ukuthi uManyi – esebenzisa inkampani entsha esungulwe ngoJuni – uthenge lezi zinkampani zezindaba ngesamba semali esingu-R450m ngesivumelwano sokubolekwa imali yiwona lo mndeni wakwaGupta.
OyiTrading Specialist, uMusa Makoni, uchaze ukuthi i-vendor financing usizo lwemalimboleko olunikezwa ngumnikazi webhizinisi, ukuze kukhokhelwe ukuthengwa kwezimpahla zalo ngumthengi.
“Ngokujwayelekile, umthengi ukhokha inani lokuqala kanti imali esele, engase ibandakanye inzalo, ikhokhwa ngesikhathi okuvunyelwene ngaso, ngezinkokhelo ezahlukene okuvunyelwene ngazo kancane kancane,” utshele iFin24 ngoMsombuluko.
I-Associate Editor yeMail & Guardian, uPhillip de Wet, ukhulume noManyi ngoMsombuluko, nothe iTimes of India isenengxenye engu- 7% wengxenye yabunikazi bamasheya “esele” kwi-TNA, ngesikhathi abaphathi bona beno-10%. “Ngale kwalokho konke okwakhe,” ubhale kanjalo kuTwitter.
Kodwa-ke iSave South Africa ithi lokhu kuthenga kuwukudidisa nje ngobuso futhi “kuyihlazo embonweni wokufukulwa kwangempela kwabantu abamnyama kwezomnotho.”
“Lokhu ‘kudayiswa’ kwethuluzi lezinkoleloze zabakwaGupta …UManyi uyisibonelo esishaqisayo sokuthi uJacob Zuma kanye nabangani bakhe bakhuluma ngani uma ngabe bekhuluma ‘ngoguquko olusheshayo lwezomnotho’,” le nhlangano, eholwa nguSipho Pityana, isho kanjalo esitatimendeni.
Okhulumela iDA, uPhumzile Van Damme, utshele iFin24 ngoMsombuluko, ukuthi leli qembu likhathazekile ngalokhu kudayiswa.
“Ngokweso labezindaba, iDA ikhathazeke kakhulu ngalokhu kudayisa uma ngabe ubheka ukuthi uManyi uyi-ANC ngokuphelele (futhi uhlangothi lukaJacob Zuma, ikakhulukazi),” usho kanjalo. “Uzoqedela izinga eselivele liphansi le-ANN7 kanye ne-TNA.
Le nhlangano ithi ikhathazekile ngokuthi i-TNA ibukeka yesekwa yizimali zikahulumeni nokuthi kungenzeka uManyi atholele i-TNA kanye ne-ANN7 ezinye izimali kuhulumeni.